Free Thinker: အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (၆)
အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (၆)
လူတွေ့စစ်မေးခြင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်များမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်၏။
ü အင်တာဗျူးရန် လူရွေးမှန်ခြင်း
ü အင်တာဗျူးရန် ကောင်းစွာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း
ü သက်တောင့်သက်သာရှိမည့်နေရာတွင် အင်တာဗျူးခြင်း
ü အခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည့် အင်တာဗျူးပုံစံရှိခြင်း
လုပ်ငန်းစစ်သည် ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး ဟူသောမေးခွန်းမျိုးထက် အဖြေတစ်ခုခုပြန်ရနိုင်မည့် အဖွင့်မေးခွန်းမျိုး ဥပမာ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်နေရာလဲ၊ ဘယ်သူလဲ၊ ဘယ်အချိန်လဲ၊ ဘယ်လိုလဲ စသည့်မေးခွန်းမျိုးကိုသာ မေးသင့်ပါသည်။ ထို အဖွင့်မေးခွန်းမျိုးမှသာလျှင် သင်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဖြေအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ထား ရပါမည်။
လုပ်ငန်းစစ်သည် သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစာရွက်စာတမ်းများထဲ တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည်။
Ø လအကမူဝါဒ ဖော်ပြချက်
Ø လအကကော်မတီစည်းဝေးပွဲ အကြောင်းအရာနှင့် မှတ်တမ်းများ
Ø သင်တန်းအစီအစဉ်နှင့် သင်ကြားမှုပစ္စည်းများ
Ø မတော်တဆမှုစာရင်းအင်းနှင့် မတော်တဆမှုစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာများ
Ø ယခင်က လုပ်ငန်းစစ် ရလဒ်များ
Ø ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ုရာ စစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းများ (ရနိုင်လျှင်)
လုပ်ငန်းထဲ၌ လက်တွေ့လုပ်နေသူများအား စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းမပြုမီ မှတ်တမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရရှိနိုင်မှု နှင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိမှု၊ တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်းသည် အလွန်အသုံးတည့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စာရွက်စာတမ်းများထဲတွင် ရေးသားထားသည်တို့နှင့် လက်တွေ့လုပ်ကိုင်နေမှုတို့ ကွာခြားချက်များ မကြာခဏရှိတတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်၏။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲသွားရောက်ကာ လက်တွေ့စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် စာရွက်စာတမ်းများ၌ ရေးသားထားသည်များ နှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းဖြင့် ရလာသော သတင်းအချက်အလက်များ မည်မျှမှန်ကန်သည်ကို သက်သေထူနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ၌ လေ့လာခြင်းကို ယခင်က မပြုလုပ်ခဲ့၊ မစစ်ဆေးခဲ့သေးသော နေရာ၊ လုပ်ငန်းများအား ဦးစားပေး စစ်ဆေးနိုင် သည်။ သို့သော်လည်း ဤကဲ့သို့လုပ်ငန်းခွင် စူးစမ်းလေ့လာမှုများ၊ လူတွေ့မေးမြန်းမှုများက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်သည့်စနစ်များ မည်မျှ ထိရောက်သည်ကို စစ်ဆေးရန်လည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်လှပေသည်။
နောက်ဆက်တွဲပုံစံ ၈ မှာ လအကစစနစ်အတွက် စစ်ဆေးချက်ပုံစံဖြစ်သည်။ ဤပုံစံမှာ မိမိတို့၏ လအကစစနစ်ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးရန် ပုံစံဖြစ်သည်။ သင်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လအကစ စနစ်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ရာတွင် ဤပုံစံကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ လအကစစနစ်အခြေအနေကို တိုင်းတာရန်လည်း ဤပုံစံက အထောက်အကူပြုပါ လိမ့်မည်။
မိမိတို့ လအကစစနစ် မည်မျှတိုးတက်လာသည်ကို အလုပ်ရှင်နှင့် လအက၀န်ထမ်းတို့နားလည်နိုင်စေရန်လည်း ဤပုံစံက အကူအညီပေးပါလိမ့်မည်။ ဤပုံစံဖြင့်စစ်ဆေးရာမှ ရလာသော ရလဒ်ကိုကြည့်၍ နောင်တွင် တိုးတက်အောင် မည်ကဲ့သို့လုပ်ရမည်ကိုလည်း သိနိုင်သည်။
လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်း ပြီးဆုံးပြီဆိုလျှင် လုပ်ငန်းစစ်အရာရှိသည် မိမိစစ်ဆေးနေသော နယ်ပယ်မှ စီမံခန့်ခွဲမှု ကိုယ်စား လှယ်များအား အကျဉ်းချုပ်ရှင်းလင်းပြရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ရှင်းပြခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်တွင် အောက်ပါတို့ပါပါသည်။
v လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် သိသာသည့် အရေးတကြီး သတိထားရမည့်အချက်များ
v လုပ်ငန်းစစ်အတွင်း မီးမောင်းထိုးပြထားသည့် တွေ့ရှိချက်များ
v အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ
လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်း၏ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ လုပ်ငန်းစစ်အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။ ထိုအစီရင်ခံစာအား ချို့ယွင်းအားနည်း ချက်များကို ပြင်ဆင်ရန် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အား တွန်းအားအဖြစ် အသုံးချနိုင်သည်။ လုပ်ငန်းစစ်အစီရင်ခံစာအတွက် ထောက်ခံ ထားသော အစီရင်ခံစာပုံစံတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည်။
v လုပ်ငန်းစစ်အနှစ်ချုပ် (Executive Summary)
v နောက်ခံအခြေအနေ (Background)
v နယ်ပယ် (Scope)
v ခြုံငုံတန်ဖိုးဖြတ်ချက် (Overall Evaluation)
v တွေ့ရှိချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ ကောက်ချက်များ (Findings, Recommendations and Conclusions)
v အရေးယူဆောင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ် (Action Plan)
လုပ်ငန်းစစ်အစီရင်ခံစာကို အောက်တွင်နမူနာပြထားပါသည်။ နောက်ခံအခြေအနေဆိုသည်မှာ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်၏ လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အပ်စပ်သော နယ်ပယ်ကိုဖော်ပြထားပြီး လုပ်ငန်းစစ် အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ က အသုံးတည့်သော အချက်များကို ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ဖော်ပြပေးသည်။ နယ်ပယ်က လုပ်ငန်းစစ်က ခြုံငုံမိသည့် အချိန်ကာလနှင့် လုပ်ငန်းတို့၏ ရှုထောင့်ကိုဖော်ပြသည်။ ထို့ပြင်၎င်းက ဧရိယာအတွင်းပြီးဆုံးသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ အတိမ်အနက်ကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ဖော်ပြပေးသည်။
ထုံးစံအားဖြင့် တွေ့ရှိချက်များကို အကျဉ်းချုပ်မှတ်ချက်ပုံစံများဖြင့် ဖော်ပြပေးသည်။ အကြံပြုချက်များကိုလည်း တိုးတက်ရေးနှင့် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ပုံစံများဖြင့် ဖော်ပြသည်။ အကြံပြုချက်များသည် လက်တွေ့ဆန် ရမည်။ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ရှိရမည်။ ထိရောက်ရမည်။
၅၊ ၁၂။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု နှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ
အဖွဲ့အစည်းတွင် ထိရောက်သော ကြိုတင်ကာကွယ်မှု နှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး အရေးယူဆောင်ရွက်ချက် ရှိရမည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်ဆိုသည်မှာ တွေ့ရှိရသည့် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများနှင့် မကိုက်ညီသဖြင့် ရရှိသောဆိုးကျိုးများကို တုံ့ပြန်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဤကဲ့သို့ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖြစ်နေမှုကို မည်သည့် အတွက် ဤကဲ့သို့ဖြစ်နေရသည်ဟူသော အကြောင်းရင်းဇစ်မြစ်ကိုရှာကာ ဖျောက်ဖျက်ခြင်း၊ ထိုသို့ရှာရာတွင်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိသည်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကာ နောက်ထပ် မဖြစ်နိုင်အောင် ကြိုတင်တားမြစ်ရမည့်နည်းလမ်းများကိုပါ ချမှတ်ဆောင်ရွက် ခြင်းစသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေး အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ချက်အဆင့် ၂ ခု ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာ ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရမည့် ပြဿနာများကို အရေးယူပြုပြင်ခြင်း၊ ဥပမာ - စံနှုန်းချိန်ခြင်း မပြုရသေးသော ကိရိယာများကို စံနှုန်းချိန်ခြင်း (calibration), သင်တန်းမပေးရသေးသော ၀န်ထမ်းများကို လိုအပ်သောသင်တန်းများပေးခြင်း စသည်။
ဒုတိယတစ်ခုမှာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာခြင်းဖြစ်၏။ ဤလုပ်ငန်းတွင် “ဘာတွေမှားသလဲ?” ဟူသောမေးခွန်းထက် “ဘာကြောင့်မှားသလဲ?” ဟူသည့် မေးခွန်းက ပိုအရေးကြီးသည်။ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတစ်ခုသည် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ၏ အသွင်လက္ခဏာဖြစ်၏။ ထိုအစီအစဉ်တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
Ø ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြဿနာကို သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ခြင်း
Ø ပြဿနာ၏ အကြောင်းရင်းကိုရှာခြင်း
Ø ပြဿနာကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း နှင့် နောင်ထပ်မံမဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ခြင်း
Ø စီမံချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
Ø ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း မည်မျှထိရောက်သည်ကို တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကို အောက်ပါတို့မှ ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
Ø လုပ်ငန်းခွင်စစ်ဆေးခြင်း နှင့် စမ်းသပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း
Ø လအက အကြံပေးခြင်း
Ø လအက လုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်း
Ø မတော်တဆမှု၊ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်မှု နှင့် အန္တရာယ်သတင်းပို့ချက်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
Ø အန္တရာယ်ကင်းစွာ အလုပ်လုပ်ရမည့် အစီအစဉ်များ
Ø စံမမီသောပစ္စည်းများကို ကြိုတင်ဝယ်ယူသုံးစွဲမှု
Ø လအက တိုင်တန်းမှုများနှင့် စနစ်၏ချို့ယွင်းမှုများ
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်တွင် လက္ခဏာသွင်ပြင်နှစ်ရပ်ရှိ၏။ ပထမတစ်ချက်မှာ အန္တရာယ်ရနိုင်ချေဆန်းစစ်ချက် နှင့် နောက်တစ်ခုမှာ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု ဖြစ်၏။ ထိုအစီအစဉ်တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
Ø ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြဿနာ သို့မဟုတ် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း
Ø ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပြဿနာတို့၏ အကြောင်းရင်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း
Ø ထပ်ခါထပ်ခါမဖြစ်ရလေအောင် ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း
Ø ထိုအစီအစဉ်များကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
Ø လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များ နှင့် ပြဿနာများတားဆီးနိုင်မှု၏ ထိရောက်မှုအခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းမြစ်သည် မအောင်မြင်ရခြင်း သို့မဟုတ် စီမံချက်ကျဆုံးရခြင်း၏ အခြေခံဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ဖြေရှင်းသည့်အခါ၊ ပြဿနာများ ထပ်ခါထပ်ခါမဖြစ်အောင် တားဆီးသည့်အခါ ပြဿနာကိုလုံးဝ အမြစ်ပြတ်သွား အောင်၊ မည်သည့်အခါမှ ပြန်လှည့်မလာတော့အောင်လုပ်ရေး၌ အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခြင်းသည် အဓိကကျပေသည်။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြဿနာကာကွယ်ရေးအစီအမံများ၏ မူလရည်ရွယ်ချက်မှာ ဤပြဿနာမျိုးနောက်ထပ် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းခြင်း ဖြစ်၏။ ထို့ပြင် ထိုအစီအမံသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများအကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ဖျောက်ဖျက်ခြင်းတို့ လုပ်နိုင်ရမည်။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြဿနာကာကွယ်ခြင်းတွင် အသုံးပြုသည့် အစီအစဉ်များသည် အလွန်ဆင်တူသည်။ သို့ရာတွင် ထိုနှစ်မျိုး၌ရှိသော ကွဲပြားခြားနားချက်များကို သိနားလည်ရန်၊ စာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့မှ ဂယက်များကို သိထားရန် လိုပါသည်။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဖြစ်ခဲ့ပြီးသော ပြဿနာကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်၏။ ၎င်းက ဥပဒေချိုးဖောက်မှု များ နှင့် ရှိနေသော ပြဿနာများကို အတွင်းမှဖြစ်စေ၊ ပြင်ပလူပုဂ္ဂိုလ်များမှဖြစ်စေ သတင်းပို့လာလိမ့်မည်ဟု ယူဆထားသည်။ အရေးယူခြင်းတွင် ဤကိစ္စမျိုးထပ်မံမဖြစ်စေရန်အတွက် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်၊ စနစ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ရည်ရွယ်ထား သည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် စာရွက်စာတမ်းများက ပြဿနာကိုသိနားလည်ကြောင်း၊ ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သင့်တော်သလို ထိန်းချုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်ဤကဲ့သို့ ထပ်မဖြစ်ပေါ်နိုင်တာသေချာကြောင်း စသည်တို့ကို သက်သေပြ သည်။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် နမူနာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းက ပြဿနာကို မဖြစ်စေအောင်ရပ်တန့်ထားရန် ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းက ပြဿနာများမဖြစ်မီ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်၊ ရှင်းလင်းပစ်ရေးအတွက် သေချာစေရန် လုံလောက်သော စောင့်ကြည့်မှုများ၊ ထိန်းချုပ်မှုများရှိနေမည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းမှ စာရွက်စာတမ်းများက ဖြစ်နိုင်သောပြဿနာများကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်ရေး၊ ဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် မျှော်မှန်းနိုင်ရန် ထိရောက်သောစနစ်တစ်ခုကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြောင်း အထောက်အထားများ ပံ့ပိုးပေးသည်။
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပြည့်စုံအောင်လုပ်သည့် တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကို မည်မျှ ထိရောက်ကြောင်း စောင့်ကြည့်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်နေရပါမည်။
၅၊ ၁၃။ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
ထိပ်ပိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည် မိမိတို့၏ လအကမူဝါဒနှင့် ရည်မှန်းချက်များ ရရှိနိုင်ရန် မိမိတို့ချမှတ်ထားသော လအကစ စနစ်ကို လက်တွေ့ အပြည့်အ၀ အကောင်အထည်ဖော်မဖော်၊ ထိုစနစ်သည် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းနှင့် သင့်တော် မတော်၊ မိမိတို့၏ လအကစစနစ် နှင့် လုပ်ဆောင်နေပုံများအား ပြန်လည်သုံးသပ်နေရပါမည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် လအကမူဝါဒသည် ဆက်လက်ကျင့်သုံးရန် သင့်တော်ပါသေး၏လော၊ လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေသည့် လအကစစနစ်မှ အပိုင်းကဏ္ဍများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုသလော စသည်တို့ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည် လအကစ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရန် လိုပါသည်။ မိမိတို့အဖွဲ့တစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ အခြား အဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်နေမှုများကိုလည်း ဆန်းစစ်ကြည့်ရပါမည်။ ထိုအထဲတွင် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားတို့၏ လိုအပ်ချက် နှင့် လအကစစနစ်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ တူညီမှုရှိမရှိ သုံးသပ်ခြင်းလည်း ပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်မှာ တန်ဘိုးဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေမှုတို့နှင့် ခွဲဝေနေ၊ ဆက်စပ်နေသည်။ ဤနေရာတွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ဖြစ်စဉ် နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ရေးအစီအမံတို့သည် ပိုမိုကျစ်လျစ်ရမည်၊ ပို၍ ပိုင်းခြားသိမြင်လာစေသည်၊ အသေးစိတ်ကျစွာ ပြည့်စုံရမည်။
ထိပ်ပိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ လအကစစနစ်၏ ထိရောက်မှုကို တန်ဘိုးဖြတ်ရန်၊ ဥပဒေကြောင်းအရ လိုအပ်ချက်များ နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ရန်လိုသည်။
၅၊ ၁၄။ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ရေး
စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုကို မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစစ်ရလဒ်များ၊ အချက်အလက်များကို စိစစ်ခြင်း၊ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် စသည်တို့မှ အစပျိုးနိုင်သည်။
ထိုလိုအပ်ချက်များသည် တိုးတက်မှုအတွက် ကြိုတင်စီမံမှုရော၊ တုံ့ပြန်မှုများကိုပါ ခြုံငုံမိသည်။ တုံ့ပြန်မှုဟူသည် ဥပဒေနှင့်မညီမညွတ် ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် လိုအပ်သည်များအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ချို့ယွင်းချက်များအား ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းက ဖြစ်ပြီးမှ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်ဆိုသည့်အပေါ်မူတည်ကာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၎င်းကို ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြဿနာများအားဆုံးဖြတ်ခြင်းအစဉ် နှင့် တုံ့ပြန်ခြင်းအား ရည်ညွှန်းသည်။
သို့ဆိုစေ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုအား တိကျသောသွင်ပြင်လက္ခဏာ သို့မဟုတ် သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏ အပေါင်းအစုကို လက်ခံနိုင်လောက်သည့်အဆင့်ရှိသည့်တိုင် ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဤသည်ကား ရလဒ်များလက်ခံနိုင်လောက်သည့် အဆင့်ရောက်လာစေရန်၊ အဖွဲ့အစည်းကို ကျေနပ် လောက်အောင် ကာကွယ်ထားရန် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့မှ ကျင့်သုံးရမည့် အရေးကြီးသောသဘောတစ်ရပ်ဖြစ်၏။
စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာအား အောက်ပါတို့မှတစ်ဆင့် မြှင့်တင်ရမည်။
Ø ကာကွယ်ရေးအစီအမံများ၏ ထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကို စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် တန်ဘိုးဖြတ်ရေး
Ø လအကစလှုပ်ရှားမှုများကို စောင့်ကြည့်နေရေး
Ø လအကပုံစံတူ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဆင့်အတန်းနှိုင်းယှဉ်ချက်
Ø လအက လုပ်ငန်းစစ်ကို သီးခြားလွတ်လပ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ခြင်း
စနစ်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ရေးအတွက် အောက်ပါပုံစံသုံးကာ စတင်ရမည့်အချက်များကို စာရင်းပြုစုနိုင်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုက အဖွဲ့အစည်း၏ လအကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မတော်တဆမှုနှုံးများ တိုးတက်ကောင်းမွန် လာစေရေးအတွက် မောင်းနှင်အားပေးသည်။ အဖွဲ့အစည်းသည် အတိတ်မှ စွမ်းဆောင်ရည်များထက် ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် ဆက်တိုက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေရမည်ဖြစ်၏။ ၎င်းတို့သည် လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတိုးတက်လာစေရန် နှင့် မတော်တဆ ဖြစ်နိုင်ချေများလျှော့ချနိုင်ရန် မည်သည့်ရနိုင်မည့် အခွင့်အရေးအတွက်ကိုမဆို အစဉ်နိုးကြားနေရမည်။ သို့သော်လည်း ထိုအခွင့်အရေးဆိုသည်များမှာ အဖွဲ့အစည်း၏ပန်းတိုင်နှင့် ရည်မှန်းချက်များနှင့်လည်း ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်၏။
လအကစဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည့်အပြင် ယခုလမ်းညွှန်ချက်သည် ထိုလအကစ စနစ်၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ -
၆၊ ၁။ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဖွဲ့စည်းပုံ
၆၊ ၁၊ ၁။ ဆက်သွယ်ရေး
အဖွဲ့အစည်း၏ ကွဲပြားခြားနားသော ဌာနများမှ ရာထူးအဆင့်အလိုက် အထက်အောက် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေး မပါဘဲ မည်သည့်စနစ်မှ ထိရောက်ကောင်းမွန်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဟူရာ၌ အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်ရေး၊ ပါးစပ်ဖြင့်ပြောဆို ဆက်သွယ်ေ၇းစသည့် မည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပုံစံမျိုးမဆို ပါဝင်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးတွင် အောက်ပါပုံစံများပါဝင်နိုင်သည်။
v အလုပ်သမားများအား အခြားကန်ထရိုက်တာများ၊ ဧည့်သည်တော်များစသည့် စိတ်ပါဝင်စားသူများအပါအ၀င် လအကဆိုင်ရာ ပြောကြားချက်များ
v လအကဆိုင်ရာသတင်းများ၊ ပိုစတာများ၊ စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပါဝင်သည့် အသိပေး ကြော်ငြာသင်ပုန်း
v သရုပ်ပြပွဲများ၊ လမ်းညွှန်ပြသမှုများပါဝင်သည့် ပြပွဲအခမ်းအနားကလေးများ
v ကုမ္ပဏီ၏ လမ်းညွှန်စာအုပ်ငယ်များ
v ထုတ်ပြန်ချက်များ ဖြန့်ဝေခြင်း
v အင်တာနက်၊ အင်ထရာနက်
မည်သို့ဆိုစေ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် လအကဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ အကြမ်းရေးခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြုပြင် မွမ်းမံခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းစသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ဆက်သွယ်ရေးထိရောက်စေရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းများပေးခြင်း၊ သတင်းစီးဆင်းသည့် လမ်းကြောင်းအား ကျကျနနတည်ဆောက်ထားခြင်းတို့ လုပ်ထားရပါမည်။ လုပ်ငန်းရှင်သည် မိမိလုပ်ငန်းအတွင်း ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို လအကနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ပုံကြမ်းရေးခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း စသည်တို့ ဖြင့် သေသေချာချာ ထူထောင်ထားရပါမည်။
၆၊ ၁၊ ၂။ တာဝန်ယူမှု
တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို လက်စွဲစာအုပ်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ သင်တန်းမှတ်စု စသည်တို့တွင် စာဖြင့်ရေးသား မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ ထိုအထဲတွင် အလုပ်သမားများနှင့်သာမက အခြားဆက်စပ်ပတ်သက်နေသည့်အဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးတာဝန် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည်။
အဖွဲ့အစည်းသည် လုပ်ငန်းခွင် အန္တရယ်များကို ထိန်းချုပ်သည့်၊ တန်ဘိုးဖြတ်သည့်၊ ဖော်ထုတ်သည့်၊ စီမံခန့်ခွဲသည့် သူများနှင့် ဆက်ဆံရေးအပါအ၀င် တာဝန်ဝတ္တရားနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို တိတိကျကျပြန်ဌာန်းပေးရမည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တွင် လအကလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေစာရင်းဌာန၊ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဌာန၊ ဆေးကုသရေး ဌာန၊ အရေးပေါ်ပြင်ဆင်ရေး၊ သင်တန်းဌာနစသည့် ဌာနများစွာ ပါဝင်နိုင်သည်။ ထိုဌာနများ၏ တာဝန်၊ ၀တ္တရားများကိုလည်း တိတိကျကျပြဌာန်းပေးပြီး ဌာနတစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်ကဲ့သို့ဆက်နွယ်နေကြောင်း အသိပေးထားရပါမည်။
လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စွမ်းဆောင်ချက်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် လအကစ စီမံချက်၏ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းအလိုက် အလုပ်ရှင်၏တိုက်ရိုက်တာဝန်ယူမှုမှာ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာ - လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်နှင့် ကျန်းမာရေး ထိန်းချုပ်မှု၊ တန်ဘိုးဖြတ်မှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် မျှော်မှန်းချက်။
တကယ်ဆိုရင် အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာများလဲ?
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိသူအားလုံးသည် သူတို့၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရား၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ တာဝန်ရှိမှုတို့ကို သေသေချာချာ နားလည်သဘောပေါက်ထားရမည်။
ဒါဆို အဲဒီလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘို့ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရမလဲ?
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိသူအားလုံးသည် သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် သူတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၏ ကျန်းမာရေးကို တာဝန်ယူ တတ်စေရန် သေချာစေရမည်။ ၎င်းတို့၏အလုပ်ခွင်ထဲတွင် သူတို့တာဝန်ယူမှုကို မည်မျှပေါင်းစပ်ကျင့်သုံးသည်ကို ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ရာ၌ ပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်သည်။
၂၇ - ၁ - ၂၀၁၃။ နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီ